Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJuana
Ukuntywiliselwa kwiparadesi yendalo egcwele uhlaza, ivumela iindwendwe zethu ukuba zihlale ngokunxibelelana nendalo, zithathe uhambo oluya kumda we-Órbigo okanye ecaleni kwedama lokutshixa ukutyelela ii-mill zenkulungwane zakudala, ukuloba okanye ukuphumla.
Indlu yasemaphandleni - El Rincón del Orbigo
Kwintliziyo yeRibera de Santa Marina del Rey yiNdlu yethu yaseMaphandleni i-El Rincón del Órbigo. Indlu eqhelekileyo eRibera del Órbigo, eyakhiwe ngo-1898 eludakeni, isitena esiqinileyo kunye nengqalutye kwifama ye-800 m2 kwaye yahlaziywa ngo-2008.
Indawo esikuyo ivumela uhambo olufutshane nolulula ukwenza uhambo oluya kweminye imimandla yephondo lethu. Ukufikelela ngokulula koohola bendlela kunye noohola bendlela. Ngaphakathi kwendlela yeJacobean okanye iCamino de Santiago kunye neRuta de la Plata.
Umbuki zindwendwe ngu- Juana
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Santa Marina del Rey